Ch7मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch7मत्ती
7:1 "निर्णय नगर, तपाईं न्याय छैन हुन सक्छ कि त.
7:2 जो न्याय तपाईंलाई न्याय लागि, त्यसैले तपाईं न्याय गरिनेछ; र जो उपाय तपाईंलाई बाहिर मापन, त्यसैले यो तपाईं फिर्ता मापन गरिनेछ.
7:3 र तपाईं कसरी आफ्नो भाइ आँखा मा splinter देख्न सक्नुहुन्छ, र आफ्नो आँखा मा बोर्ड देख्न?
7:4 वा तपाईं कसरी आफ्नो भाइ भन्न सक्छौं, 'मलाई आफ्नो आँखा बाट splinter गरौं,'गर्दा, हेर, एक बोर्ड तपाईंको आफ्नै आँखा छ?
7:5 कपटी, पहिले आफ्नो आफ्नै आँखा बाट बोर्ड हटाउन, र तपाईंले भाइ आँखा बाट splinter हटाउन स्पष्ट पर्याप्त देख्ने.
7:6 कुकुर पवित्र दिन छैन, र सुँगुर अघि आफ्नो मोती डाली छैन, सायद नत्र तिनीहरूले आफ्नो खुट्टामा अन्तर्गत तिनीहरूलाई trample सक्छ, अनि तेस्पछि, खोल्दै, तिनीहरूले अलग तपाईं आंसू सक्छ.
7:7 सोध्न, र यो तपाईं दिइएको गरिनेछ. खोजी, र तपाईं पाउन पर्छ. Knock, र यो तपाईं उघारिनेछ.
7:8 सबैका लागि जो सोध्छन्, प्राप्त; and whoever seeks, पाता; and to anyone who knocks, it will be opened.
7:9 Or what man is there among you, जो, if his son were to ask him for bread, would offer himastone;
7:11 त्यसैले, यदि तिमी, though you are evil, know how to give good gifts to your sons, how much more will your Father, जो स्वर्गमा छ, give good things to those who ask him?
7:12 त्यसैले, सबै कुरा पाठका तिमी मानिसहरू तपाईं के भनेर इच्छा कि, तिनीहरूलाई त पनि के. यस को लागि व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले छ.
7:13 साँघुरो ढोकाबाट प्रविष्ट गर्नुहोस्. विस्तृत लागि गेट छ, र व्यापक बाटो छ, जो perdition निम्त्याउँछ, र यसलाई माध्यम प्रविष्ट गर्ने छन्.
7:14 गेट कसरी साँघुरो छ, र बाटो कसरी सीधा छ, जो जीवन जान्छ, र केही पत्ता लगाउन गर्ने छन्!
7:15 झूटा अगमवक्ताहरू खबरदार, भेडा लुगा मा तपाईं जो आउन, तर inwardly ravenous ब्वाँसा हुन्.
7:16 तपाईं आफ्नो फल तिनीहरूलाई थाहा पर्छ. अङ्गुर thorns देखि जम्मा गर्न सकिन्छ, वा thistles देखि नेभारा?
7:17 त्यसैले त, हरेक असल रूखले राम्रो फल उत्पादन, र दुष्ट रूख दुष्ट फल उत्पादन.
7:18 राम्रो रूख दुष्ट फल उत्पादन गर्न सक्षम छैन, र दुष्ट रूख राम्रो फल उत्पादन गर्न सक्षम छ.
7:19 राम्रो फल उत्पादन गर्दैन हरेक रूख काटेर आगोमा हालिन्छ गरिनेछ.
7:20 त्यसैले, तिनीहरूका फलबाट तपाईंले तिनीहरूलाई थाहा हुनेछ.
7:21 मलाई भन्न जो सबै, 'प्रभु, प्रभु,'स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ. तर मेरो पिताको इच्छा गर्छ जसले, जो स्वर्गमा छ, एउटै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ.
7:22 धेरै दिन मा मलाई भन्न हुनेछ, 'प्रभु, प्रभु, हामी आफ्नो नाम मा अगमवाणी गर्नुभयो, आफ्नो नाम मा दुष्ट र फ्याँकिएको, र आफ्नो नाममा थुप्रै शक्तिशाली कामहरू प्रदर्शन?'
7:23 त्यसपछि म तिनीहरूलाई खुलासा हुनेछ: 'म तपाईंलाई ज्ञात कहिल्यै. मलाई देखि आउट, तपाईं iniquity को कार्यकर्ता। '
7:24 त्यसैले, मेरो यी शब्दहरू सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई गर्छ जसले सबैलाई एक बुद्धिमानी मानिस तुलना गरिनेछ, जसले रक मा आफ्नो घर निर्माण.
7:25 र वर्षा descended, र बाढी माथि गुलाब, र बतासलाई उडा, र घर मा रवाना, तर यो गिर गरेनन्, लागि यो रक मा स्थापित भएको थियो.
7:26 अनि मेरो यी शब्दहरू सुन्नुहुन्छ र गर्दैन जो सबैलाई तिनीहरूलाई मूर्ख मानिस जस्तै हुनेछ, जसले बालुवा मा आफ्नो घर निर्माण.
7:27 र वर्षा descended, र बाढी माथि गुलाब, र बतासलाई उडा, र घर मा रवाना, र यो गिरावट गरे, र ठूलो यसको खण्डहर थियो। "
7:28 र यो भयो, येशूले यी शब्दहरू पूरा गरेको थियो जब, that the crowds were astonished at his doctrine.
7:29 उहाँले रूपमा तिनीहरूलाई सिकाउँदा लागि जो अधिकार छ, and not like their scribes and Pharisees.